कसरी तपाईंको उपकरणमा एप्पल संगीत संग खाली ठाउँ आईफोन समाचार
तपाईंको उपकरणमा एप्पल संगीतबाट संगीत हटाउने ठाउँ खाली गर्न
यो तपाईं जस्तो धेरैलाई हुन सक्छ, म जस्तो, हामीसँग सँधै कष्टदायी चेतावनी छभण्डारण लगभग भरिएकोOur हाम्रो उपकरणहरूमा, कष्टप्रद केहि चीज, किनकि मसँग मेटाउनको लागि अधिक फोटोहरू छैन वा मेटाउनको लागि अनुप्रयोगहरू ... तर हामी खाली गर्न सक्दछौं यदि हामी हाम्रो एप्पल संगीत उपकरणमा भण्डारण गरिएका गीतहरू मेटाउँछौं.
प्रक्रिया तपाईंको आईप्याड वा तपाईंको आईफोनको लागि समान छ र हामी सबै वा केही गीतहरू मेटाउन सक्छौं, म यसलाई स्पष्ट पार्छु, सुरु गरौं!
1 सबै भण्डार गरिएको संगीत कसरी हटाउने।
2 कसरी एक विशिष्ट कलाकार बाट गीतहरु हटाउने।
सबै भण्डार गरिएको संगीत कसरी हटाउने।
पहिले जानुहोस् सेटिंग्स.
थिच्नुहोस् सामान्य > प्रयोग गर्नुहोस् (आईओएस or वा अघिल्लो) भण्डारण र आईक्लाउड (आईओएस))> भण्डारण प्रबन्ध गर्नुहोस्.
सबै अनुप्रयोगहरू लोड हुन्छन्, अब थिच्नुहोस् संगीत.
माथिको दायाँ कुनामा एउटा बटन छ जुन भन्दछ सम्पादन गर्नुहोस्, बिना डरा यो प्रेस।
«सबै गीतहरू on मा क्लिक गर्नुहोस् र रातो बटन देखा पर्नेछ। मेटाउनुहोस्, प्रेस र भोइला, तपाईं आफ्नो आईप्याड वा आईफोनमा खाली ठाउँ।
कसरी एक विशिष्ट कलाकार बाट गीतहरु हटाउने।
सबै अनुप्रयोगहरू लोड हुन्छन्, थिच्नुहोस् संगीत। अब हामीसंग संगीत हटाउनका लागि दुई विकल्पहरू छन् कलाकार गीतहरू वा पूर्ण कलाकार.
मा क्लिक गर्नुहोस् कलाकार यसका गीतहरू खोल्न।
यस कलाकारका सबै गीतहरू प्रदर्शन हुनेछ, अब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस् र तपाईंलाई मनपर्ने गीतहरू मेटाउनुहोस्।
अब प्रेस गर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस् पर्दा माथि।
कलाकारमा क्लिक गर्नुहोस्, रातो बटन देखा पर्नेछ। मेटाउनुहोस्यसमा थिच्नाले छानिएका कलाकारको सबै गीतहरू मेटिनेछन्।
मलाई आशा छ कि यस गाइडले तपाईंलाई आफ्नो उपकरणहरूमा खाली ठाउँ बढाउन मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » एप्पल संगीत » तपाईंको उपकरणमा एप्पल संगीतबाट संगीत हटाउने ठाउँ खाली गर्न
आईओएस ((III) को साथ उपयुक्त ट्वीक्स